Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » komzila Ngoku » Yayivela phi iCoronavirus?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
I-CIA izamile yabuya ingenanto. I-US ingathanda ukubeka ityala elebhu yase-China ngokuvuza, ngelixa i-China ibuyisa umva kwaye yalatha ngomnwe kwilebhu yase-US njengembuyekezo.
I-CIA kunye nezinye iiarhente ze-US Spy zabuya zingenanto zinike ingxelo yabo malunga nendlela i-COVID-19 eqale ngayo kunye nonxibelelwano lwase China.
Umongameli wase-US uBiden uxelelwe ngoLwesibini ebusuku malunga neziphumo ezingachanekanga zolu phando
Umbuzo wawukhona kwaye uhlala ukuba iCoronavirus iqale ngokwendalo okanye ibisisiphumo sengozi yokuvuza kwelebhu okanye ulingelo.
Ingxelo ye-CIA e-China
Uvavanyo, oluyalelwe nguMongameli wase-United States u-Biden kwiintsuku ezingama-90 ezidlulileyo, lubonisa umceli mngeni kulawulo olunzima lokufumana ulwazi ngakumbi kunye nentsebenziswano kuRhulumente we China wase-Beijing.
Owayesakuba nguMongameli uTrump wabiza I-COVID-19 intsholongwane yaseTshayinas.
Ekuqaleni kweNtsholongwane World Health Organization (WHO) bancoma iChina kwimpendulo yayo yeCoronavirus.
I-China iyathandabuza ukwabelana ngeerekhodi zelebhu, iisampulu ze-genomic, kunye nenye idatha enokubonelela ngakumbi ngemvelaphi yentsholongwane, ngokutsho kwinqaku lengxelo entsha yezobuntlola epapashwe namhlanje kwi Wall Street Journal.
Isiphelo ukuza kuthi ga ngoku kukuba i-China ayizukunika ukufikelela kwiiseti ezithile zedatha, inyani ayisoze ivele.
Ijenali yeWall Street igubungele ukufuna iimpendulo kwihlabathi, kulandelwa uMbutho wezeMpilo weHlabathi, oogqirha kunye nososayensi e-China nakwilizwe liphela, uluntu lwezobuntlola lwase-US, kunye nothungelwano olukhulu lweengcali zezifo, bonke bezabalazela ukudibanisa iseti yokudida imikhondo eyahlukileyo. Nazi ezinye zeziphumo eziphambili.
Uphando lweWall Journal lufumanise ukuba i-China yaxhathisa uxinzelelo lwamazwe aphesheya lophando olwabonayo njengenzame yokubeka ityala, yalibazisa uphando kangangeenyanga, yafumana amalungelo e-veto ngaphezulu kwabathathi-nxaxheba kwaye yanyanzelisa indawo yayo ukuba ihlanganise namanye amazwe.
Iqela elikhokelwa yi-WHO eliye eTshayina ekuqaleni konyaka ka-2021 ukuyokuphanda ngemvelaphi yentsholongwane lazama ukufumana umfanekiso ocacileyo woluphi uphando olwenziwa e-China ngaphambili, bejamelene nezithintelo ngexesha lotyelelo lwalo monthlong, kwaye babengenamandla okwenza uphando olucokisekileyo, olungakhethi cala. ngaphandle kwentsikelelo yorhulumente wase China. Kwingxelo yabo yokugqibela, abaphandi bathi ubungqina obaneleyo abuthethi ukuba abanako ukusombulula ukuba nini, phi, kwaye njani intsholongwane yaqala ukusasazeka.
Iingxelo kwimithombo yeendaba ezinobuhlobo zaseTshayina zifundeka: Iarhente ye-UN ngolwe-Sihlanu odlulileyo yacebisa inqanaba lesibini lezifundo kwimvelaphi yecoronona iTshayina ndatsalela umnxeba iTshayina Ukuba benze izinto elubala, bavuleleke kwaye basebenzisane.
Emva kophando oludibeneyo lwe-WHO-China olugqibe kwelokuba yinkcitha-xesha ukujonga le ithiyori yokufa ngo-Matshi, uMongameli wase-US uJoe Biden walandela owayengaphambi kwakhe u-Donald Trump kwaye wacela ukuba kwenziwe olunye uphando kwilebhu ye-bio ese-Wuhan.
Kodwa ii-Biolabs ezininzi zase-US zikwangabarhanelwa bokuvuza, kwaye uninzi lwabantu baseTshayina lubeke uphawu lombuzo eFort Detrick, ilebhu ye-bioweapon yase-US eyamiselwa ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi.
Umphathiswa Wezangaphandle wase China ngoMvulo ubize uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) ukuba ugcine isikhundla senzululwazi kunye nobungcali ekufumaneni imvelaphi ye-COVID-19 kwaye uchase ngokuqinileyo umcimbi wezopolitiko njengoko ulungiselela isigaba sesibini sesifundo.
I-arhente ye-UN ngolwe-Sihlanu odlulileyo yaphakamisa isigaba sesibini sophando ngemvelaphi ye-coronavirus e-China kwaye yacela i-China "ukuba icace gca kwaye ivule kwaye isebenzisane."
Isindululo se-WHO asihambelani nemeko ye-China kunye namazwe amaninzi, isithethi se-China Wezangaphandle u-Zhao Lijian uxelele umhlangano weendaba mihla le.
Isicwangciso sesigaba esilandelayo sophando lwemvelaphi yehlabathi kufuneka sikhokelwe ngamazwe angamalungu njengoko kuvunyelwene ngesisombululo seNdibano yezeMpilo ye-73th, utshilo uZhao.
"Siyathemba ukuba i-WHO kunye namazwe angamalungu banxibelelana ngabom kwaye bathethathethane bodwa kwaye bamamele ngokubanzi izimvo kunye neengcebiso zawo onke amaqela kwaye siqinisekise ukuba inkqubo yokuyilwa kwesicwangciso somsebenzi ivulekile kwaye icacile," uxelele iintatheli, esongeza isindululo se-WHO. kwimvelaphi yokufunda kufundwa ziingcali zaseTshayina.
Ukufundwa kwe-Origins ngumba wesayensi kwaye kufuna intsebenziswano yoososayensi kwihlabathi liphela, utshilo uZhao, ngelixa egweba amazwe ambalwa, kubandakanya i-US, ngokwenza ezopolitiko intsholongwane.
AmaTshayina ajika ityala ngokujolisa kwiLebhu yaseMaryland yaseMelika.
Ukusukela ngemva kwemvulo yangoMvulo, ngaphezulu kwama-750,000 abemi baseTshayina batyikitye ileta edibeneyo eya kwi-WHO, ifuna umbutho wenze uphando kwilebhu yase-US.
"I-US kufuneka ijongane namazwi oluntu lwamanye amazwe kubandakanya nabantu baseTshayina, kwaye banike ingxelo eyonelisayo", utshilo uZhao.
Umphathiswa Wezangaphandle wase China ubize iWashington ukuba iphendule kwiinkxalabo zamanye amazwe malunga neelebhu zayo ze-bio kwaye imeme iingcali zamanye amazwe kumhlaba wayo ukuba ziphande ngomngcipheko wazo.
Ukukhangela apho ivele khona intsholongwane kuye kwaba ngumcimbi wezopolitiko owenze ukuba ubudlelwane be China buwohloke ne-US kunye nabalingane abaninzi baseMelika. I-US kunye nabanye bathi i-China khange icace gca malunga noko kwenzekileyo kwiintsuku zokuqala zobhubhane. I-China ityhola abagxeki ngokufuna ukuyityhola ngobhubhane kunye nokufaka umgaqo-nkqubo kwezopolitiko.
Kubonakala ngathi inyani ayinakuze ivele, ngelixa amawaka esifa mihla le ngenxa yayo nantoni na eyenzekileyo nge-COVID-19.
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 24
umfanekiso weskrini دردشة عراقية دردشة العراق شات عراقي شات ذهب دردشة صوتية شات عراقنا